Jirama: nampahafantarina ny fikambanan’ny mpanjifa ny tetikasa rehetra | NewsMada
Maro ny tetikasan’ny Jirama amin’ny lafiny herinaratra sy ny rano. Tanjona ny hanatsarana ny tolotra ho an’ny mpanjifa, sady hanarenana rahateo ny toe-bolan’ny orinasa.
Manana adidy lehibe amin’ny fampahafantarana ny tena zava-misy ny mpanjifa ny fikambanana miaro ny zony. Nihaona amin’ny tompon’andraikitry ny Jirama ireo fikambanan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa, miisa efatra (Fimpa, VOMZM, MCI, Scae-PC) ny 14 jona teo. Naharitra adiny efatra ny fihaonana, niresahana lafin-javatra maro, nanomezan’ny tale jeneraly, Andriamanga Vonjy, fanazavana avokoa. Anisan’izany ireo tetikasan’ny Jirama rehetra, toy ny fanarenana ny fantson-drano, ny « fampidiran-jiro mora », ny fanarenana sy ny fampitaovana ny tobim-pamokaran’ny Jirama manerana ny faritra, sns. Nohazavaina koa ny fanavaozana ny sandan-jiro vaovao, ny toe-bolan’ny orinasa. Nifarimbona namaly ny fanontaniana ny filohan’ny fikankevim-pitantanana (PCA) ny Jirama sy ny tale jeneraly (DG).
Ho vita tsy ho ela ny Mandroseza II
Nosinganin’ny DG Andriamanga Vonjy manokana fa ho vita tsy ho ela ny foibe mpamokatra rano Mandroseza II. Afaka mitahiry rano 43 000 m3 isan’andro ity toby vaovao ity, ahitana fitaovana fanadiovan-drano. Eo koa ny fanavaozana ireo fantson-drano ampolony kilometatra, hamaha olana betsaka amin’ny famatsian-drano eto Antananarivo. « Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity toby ity, ampiasana ny teknolojia avo lenta”, hoy ihany izy.
Nanazava tamin’ny antsipiriany mikasika ny fanavaozana ny vidin-jiro ny PCA, Andriamanampisoa Solo. Ao anatin’ny ezaka hanarenana ny toe-bolan’ny Jirama izany. Nampahafantariny koa ny fanamby manaraka ho an’ny orinasa.
Nisy ny fifanarahana niombonana natao sonia, teo amin’ny Jirama sy ireo fikambanan’ny mpanjifa, miisa efatra.